Agromart | Agricultural Marketplace Nepal काँक्रो खेती गर्ने तरिका – Agromart
काँक्रो खेती गर्ने तरिका
Q 1. प्रति रोपनी जमीनबाट काँक्रोको उत्पादन कति सम्म लिन सकिएला ?
Q 2. काँक्रोको खेतवारीमा गोडमेल गर्न जादा हाम्रो अनुहार, आँखा, कान, जीउमा साना कीरा फट्फट गरिरहेका हुन्छन् ती कीराको नाम के हो ? यिनीहरुको व्यवस्थापन विधी के अपनाउन सकिन्छ?
Q 3. हामीले उत्पादन गरेका काँक्रोका फलहरु कहिले काँही तिता–तिता हुन्छन् कारण के होला ?
Q 4. कहिले काही जाडो याममा प्लाष्टिक घरभित्र पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिन्न, यसको राम्रो उत्पादनको लागि के के उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ ?
Q 5. प्लाष्टिक घरका काँक्रो उत्पादन गर्दा बिचार नपुर्याखई नहुने कुरा के के हुन ?
Q 6. फल भण्डारण गर्नुपर्दा कति तापक्रम र आर्द्रतामा राख्दा लामो अवधि टिकाउन सकिन्छ ?
Q 7. फल ढुवानी गर्दा कसरी फललाई बचाउन सकिन्छ ?
ग्रेडिङ्ग / छनौट गरिएका फलहरुलाई प्लाष्टिक क्रेट, टोकरी, डोको वोरामा टम्म मिलाएर ढुवानी गर्नु पर्दछ। यसरी टाढा ढुवानी गर्दा प्लाष्टिक क्रेटमा राख्दा बढी सुरक्षित हुन्छ ।
Q 8. राम्रो भाउ पाउन छनौट/ग्रेडिङ्ग गर्दा कुन कुन कुराहरुमा ध्यान पुर्या उनु पर्दछ ?
Q 9. फल कुन कुन समयमा टिप्नु पर्दछ ?
Q 10. काँक्रो वालीमा काँटछाट र तालिम भन्नाले के बुझिन्छ ? यसबाट के फाइदा हुन्छ ?
जाडो याममा एक डाँठ खेती गर्दा सबै शाखा हाँगाहरु शुरुमै हटाउदै जानु पर्दछ।नफलेका बुढा हाँगा, बुढा र रोगी पातहरु आर्कषक नभएका कलिला वा ठूला फलहरु हटाई रहनु पर्दछ। वोटलाई दिएको छाप्रो वा थाँक्रामा पनि मुन्टा लगाई राख्नु पर्दछ जसले गर्दा लहरा फैलन र फल लाग्न सहयोग पुग्दछ ।
Q 11. काँक्रो वालीमा थाँक्रा अथवा छाप्रो बनाउन किन आवश्यक हुन्छ र कसरी बनाईन्छ ?
काँक्रो लहरे वाली भएको कारणले यसको वृद्धि विकास साथै फलेको काँक्रो फल माटोमा परी नसडोस/नबिग्रियोस भन्ने उद्धेश्यका साथ थाँक्रा अथवा छाप्रा दिईन्छ । वोटहरु थोरै संख्यामा भए रुखको हाँगा वा वाँसको लिँगो वोटको नजिकै गाडेर थाँक्रा दिईन्छ । ब्यावसायिक स्तरमा खेती गर्दा १.५ मीटर देखि २ मीटर अग्लो खम्वा गाडी वासको भाटा वा डोरी बाँधेर टाँड बनाईन्छ ।
Q 12. कुनै कुनै बेला काँक्रो लगाएको खेतवारीमा ज्यादै नराम्रो गन्धको महसुस हुने कारण के हो ? यसको ब्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 13. फेरोमन ट्रयापमा भाले झिगांहरु पर्दछन ? यसको कारण के हो ?
Q 14. क्यूलिएर नामक फेरोमन ट्रयापले कुन कुन कीराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? यसको लागि कुन कुन रसायनहरु प्रयोग गर्नुपर्दछ ?
Q 15. कुन कीराको आक्रमणले गर्दा काक्राको फलको आकार प्रकार बिगारी दिने र कुहाउने गर्दछ ?
फल कुहाउने औंसा/झिंगाको आक्रमणले गर्दा फलको आकार कुरुप हुने तथा फल कुहिने हुन्छ।यसको आक्रमणबाट ५० प्रतिशत भन्दा बढी फलहरु नष्ट हुन्छन् ।
Q 16. लाही कीराको प्रकोपले काँक्रो वालीमा कुन हदसम्म नोक्सानी गर्दछ ?
Q 17. पाटे खपटेले काँक्रो वालीमा कसरी वालीमा नोक्सानी पुर्या।उँदछ र यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 18. रातो खपटे कीराले वालीको कुन–कुन अवस्थामा आक्रमण गर्दछ ? यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय के हो ?
Q 19. काँक्रोमा कागे रोगको लक्षण कस्तो हुन्छ ? यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 20. काँक्रोको पात गुजमुज हुने रोग कुन कीराको माध्यमबाट फैलिन्छ ? यसको रोकथाम गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय के होला ?
Q 21. काँक्रोको पातको तल्लो सतहमा पानीले भिजे जस्तो रोग के कारणले गर्दा लाग्दछ ? यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 22. डाउनी मिल्डयूले विरुवामा कस्तो असर गर्दछ तथा व्यवस्थापन विधि कस्तो हुनुपर्दछ ?
Q 23. धुलो ढुसी रोग कसरी पहिचान गर्ने र यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 24. मौसम अनुसार सिचाई तथा निकासको व्यवस्था कस्तो हुन जरुरी छ ?
Q 25. काँक्रो वालीमा गोडमेल कसरी गरिन्छ ?
Q 26. व्यवसायिक काँक्रो खेती गर्दा मलखादको ब्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
Q 27. काँक्रोको बीउ सोझै खेतमा रोप्न सकिन्छ तर आजकल किन प्लाष्टिक ब्यागमा पनि उमारिन्छ ?
Q 28. काँक्रो रोप्ने जमीन कसरी तयार गरिन्छ ?
Q 29. नेपालमा हाईब्रीड जात प्रवेश भएपछि बेमौसमी काँक्रो खेती शुरु गरिएको छ, यी जातहरुमा के विशेषता पाइन्छ ?
Q 30. राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिले भौगोलिक क्षेत्र अनुसार सिफारिस गरेका जातहरु अलग–अलग उल्लेख गरिदिनु हुन्थ्यो कि ?
Q 31. भक्तपुर स्थानिय जातको विशेषता के हो ?
Q 32. कर्भी भन्ने जातको विशेषता के हो ?
Q 33. बढी गर्मी र बढी जाडो सहन सक्ने खालका जातहरु कुन–कुन हुन ?
बढी गर्मी सहने जातहरु जापानिज लङ्ग, एफ–१ हुन् भने बढी जाडो सहने जातहरु भक्तपुरे स्थानीय, कुशले हुन्।
Q 34. नेपालमा पाइने स्थानिय जातहरुमा कुन जात सबैभन्दा प्रचलित छ र किन ?
Q 35. यसलाई कस्तो किसिमको माटो उपयुक्त हुन्छ ?
Q 36. यो वाली कस्तो किसिमको हावापानीमा राम्रो फस्टाउँछ ?
Q 37. काँक्रोमा कुन कुन खनिज तत्वहरु बढी मात्रामा प्राप्त हुन्छन् ?
Q 38. काँक्रोको प्रयोग कुन कुन रुपमा गर्न सकिन्छ ?
Q 39. काँक्रो समूह अन्तर्गत पर्ने अन्य तरकारी वालीहरु कुन कुन हुन ?